खानपानमा ध्यान नपुग्दा टीकाको दिन अस्पतालमा.. « Janata Samachar
खानपानमा ध्यान नपुग्दा टीकाको दिन अस्पतालमा..
कैलाली । जोशीपुरका सन्देश तौरासिया दशैंको टिकाको दिन अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो । उच्च रक्तचाप र मधूमेहको बिरामी सन्देशलाई दशैंको खानपानले बिरामी बनाएको हो ।
‘घरमा बोका काट्यौं, चिल्लो रोटी धेरै खाइयो, जसले मलाई समस्या भयो’, चौरासियाको मनाई छ । ‘चाडपर्वमा घरमा चिल्लो खानेकुरा बढी पाक्यो, शरीरमा चीनिको मात्रा बढी भयो । सोमबार दशैंको टीका लगाउने दिन म त बिरामी परेर टीकापुर अस्पतालमा छु ।
चाडबाडका बेला खानपिनमा सचेत नहुने आम चरित्र देखिन्छ । गाउँघरमा बलीका रुपमा होस् या दशैं मनाउन काटिएको खसीको मासु ३/४ दिनसम्म पनि खाने चलन गलत भएको टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले बताउनुभयो ।
सामान्य तया शरीरलाई चाहिएको भन्दा बढी मात्रामा खाए जुनसुकै खाद्यपद्धार्थले पनि असर गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । दीर्घरोगी, उच्च रक्तचापका बिरामी र कोलेस्टोर भएका बिरामीले मासु खाँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने डा. कँडेलको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, टीका लगाउँदा भीडभाड नगरी, मास्कको प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई दशैं मनाउन समेत स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिएका छन् ।